IWarzone 2100, umdlalo weqhinga lokwenene wexesha lokwenene | Ubunlog
IWarzone 2100, umdlalo weqhinga lokwenene wexesha lokwenyani
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iWarzone 2100 Umthombo ovulekileyo weqhinga lokwenene lomdlalo wexesha. IWarzone 3.3.0 luguqulelo lwamva nje lomdlalo okhutshwe kutshanje. Inguqulelo yokugqibela ezinzileyo ikhutshelwe iminyaka emi-3.
Kule migca ilandelayo siza kubona indlela esisiseko yokufaka lo mdlalo kwi-Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 19.10 kunye no-Ubuntu 16.04 LTS. Imalunga ne- Umdlalo wabadlali abaninzi okwinqanaba lomnqamlezo. IWarzone 2100 ekuqaleni yaphuhliswa njengomdlalo wentengiso yiPumpkin Studios kwaye yakhutshwa ngo-1999.
Umdlalo uyi-3D ngokupheleleyo, imephu ekwigridi. Izithuthi zijikeleza imephu, zihlengahlengisa kumhlaba ongalinganiyo, kwaye iipilesile zinokuthintelwa ngokwenyani ziziduli neenduli. Ikhamera ihamba ihamba emoyeni ngokukhululeka okukhulu, ikwazi ukujikeleza nokusondeza. Yonke into ilawulwa yimpuku okanye ikhiphedi enenombolo Ekuhambeni kwedabi.
Umdlalo uza kusinika Umkhankaso, abadlali abaninzi kunye neemowudi zomdlali omnye. Ukongeza, siya kuba nakho ukusebenzisa umthi wobuchwephesha obanzi onobuchwephesha obungaphezulu kwama-400 ohlukeneyo, odityaniswe nenkqubo yoyilo lweyunithi, iyakusivumela ukuba sibe neendidi ezininzi zeeyunithi ezinokubakho kunye namaqhinga. Umsebenzisi uya kuyalela imikhosi 'Iprojekthi'Kwidabi lokwakha kwakhona umhlaba emva kokuba uluntu luphantse latshatyalaliswa yimijukujelwa yenyukliya.
Iimidlalo ezingama-25 ezidumileyo zeLinux
1 Iimpawu ngokubanzi zeWarzone 2100
2 Faka iWarzone 2100 kwi-Ubuntu
Iimpawu ngokubanzi zeWarzone 2100
Iiyunithi (izithuthi) zingenziwa ngokwezifiso Ngokumalunga: i-chassis (ithathela ingqalelo ubunzima kunye namandla), inkqubo yokutsala (amavili, imixokelelwane yokukhasa okanye i-hovercraft) kunye nezinto ezongeziweyo (ezinjengezixhobo okanye izixhobo).
IWarzone 2100 ibeka ugxininiso olukhethekileyo kwii-sensors kunye nee-radars ukufumana iiyunithi kunye nokulungelelanisa uhlaselo lomhlaba. Ii-anti-battery sensors zibona izixhobo zokudubula ukulandela iiprojekhthi zabo kunye neearcs zokudubula kude kube kubalwa indawo abakuyo.
Umdlalo ubeka ugxininiso olukhulu kwizikrweqe kuba le yeyona nto iphambili kuhlaselo lweziseko zotshaba kunye nezikhundla zabo.
Itekhnoloji inokuthengwa ukuqokelela izinto zakudala ezishiywe ziiyunithi zotshaba kutshatyalaliswa.
Iiyunithi zinokunyuka ziye phezulu Izikhundla ezivela kwiRokie ukuya kuQeqesho kunye noProfessional.
Ngexesha lomdlalo, rhoqo Iividiyo ziyavela eziza kusibeka ngakumbi ebalini.
Umdlalo esiza kuwufumana ifumaneka ngeelwimi ezininzi ezahlukeneyo, phakathi kwesiSpanish.
Injongo yemishini ibonakalisa i-RTT (amaqhinga okwenene-ixesha) yomdlalo. Inqanaba ngalinye kumdlalo, ngaphandle kweyokuqala neyokugqibela, ine-a elona xesha liphezulu apho umdlali kufuneka awugqibe umsebenzi wakhe. Oku kunika imvakalelo yongxamiseko kwaye kuthintele abadlali ekuchitheni ixesha elininzi bekhangela izixhobo ukwakha iiyunithi.
Indawo yeli phulo ayitshintshi kwinqanaba ngalinye. Ngaphandle kwemishini yamanye amazwe, apho intsimi iyanda ngomsebenzi ngamnye. Izakhiwo zomdlali kunye neziseko ziyagcinwa ngokuhamba kwexesha.
Ezi zizinto nje ezimbalwa zomdlalo. Iinkcukacha ezithe kratya ziyafumaneka kwi iwebhusayithi yeprojekthi okanye kweyakho Iphepha leGitHub.
Faka iWarzone 2100 kwi-Ubuntu
Ngethamsanqa, abasebenzisi be-Ubuntu 18.04+ baya kuba nakho yifake kwi-Ubuntu yesoftware ukhetho njenge snap pack, ezinje ngeplppak okanye uguqulelo olukhoyo kubuntu-bionic-universal repository. Kufuneka siyijonge kwaye siyifake apho 'Indawo yemfazwe 2100'ku-Ubuntu.
Ukuba usebenzisa Ubuntu 16.04, kwaye ufuna ukufaka ipakethe ye-snap, kufuneka uqale ufake i-snapd. Yenza kwi-terminal (Ctrl + Alt + T) lo myalelo ulandelayo wokufaka iplagi kwi-Ubuntu 16.04:
Ngoku, sebenzisa lo myalelo ulandelayo ukuya faka umdlalo weWarzone:
Nje ukuba ukufakwa kugqityiwe, sinokuyiqala ngokukhangela i-launcher kwikhompyuter yethu:
Ukuba uzama kwaye awuwuthandi umdlalo, sebenzisa lo myalelo ulandelayo kwi-terminal (Ctrl + Alt + T) ukukhipha iWarzone 2100 kwi-Ubuntu:
sudo snap remove warzone2100
Unokufumana ulwazi oluthe kratya malunga noluntu olukhoyo kulo mdlalo ngu iifom.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » IWarzone 2100, umdlalo weqhinga lokwenene wexesha lokwenyani
I-Tangram, ukhetho olutsha olusekwe kwi-GNOME kwiqela lethu kwii -apps
IPlasma 5.18 elungiselelwe uFebruwari, iya kuba luhlobo lweLTS